राष्ट्रिय सभामा वामदेव कि कुलमान ? – देशदृष्टि
Posted bymilanbagale September 17, 2020 Posted inUncategorized
कुलमान घिसिङ ‘उज्यालो निर्माता’ को सग्लो र अग्लो छविसहित भदौ ३० गते विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विदा भए । एउटा प्रशासकको विदाइ सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको दृश्य विरलै देख्न पाईन्छ । विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद अब सामान्य रहेन । लामो समयको अध्यारोपछि पाएको उज्यालो काट्ने ब्यक्ति आउँला कि भनेर जनताको मनमा अनेक शंका उब्जेका छन् । कसैले उज्यालोमा झटारो हान्ला कि भन्ने डर छ । अब आउने नयाँ निर्देशकले यो पदको गरिमा र कुलमानले कमाएको जशलाई बुझेरै काम गर्लान् भन्ने आशा गरौं ।
सर्वत्र निराशाजनक काम र गलत नियुक्तीले थिचिएको देशमा राम्रो गरिरहेको एउटा प्रशासकलाई अर्को मौका नदिइ घर फर्काइदा धेरैलाई नमिठो लाग्यो । चिन्तामात्र होइन, आक्रोशसमेत पोखियो सामाजिक सञ्जालमा । यो चासो, चिन्ता र चिन्तन स्वभाभिक थियो । उनको फैलिएको विराट ब्यक्तित्वले थप पखेटा हालोस्, उनी आफूले बालेको उज्यालोलाई अखण्ड ज्योति बनाउन भूमिका खेल्न सकून र त्यही पदमा चाहि नदोहोरियून् भन्ने भाव बोकेको मेरो लेखले (हिमालखबर डटकममा भदौ २९ गते प्रकाशित) पनि धेरै प्रतिक्रिया जन्मायो । उज्यालो निर्माता सन्तोषको श्वास फेर्दै उज्यालो अनुहारसहित विदाइ हुन लाग्दा सन्तोष लागेको हो । उनको नेतृत्वमा बलेको उज्यालोमा अब कसैले झटारो हान्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ । पद सकिएपछि अपजशको भारी बोकेर उनले विदा हुन परेन । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पावर सकिएसंगै उनको ईज्जत चुलिएको छ । औलामा गन्न सकिने राम्रा ब्यक्तिको रुपमा उनी मनमनमा बसेका छन् ।
तस्वीर साभार— हिमालखबर डटकम
विधुत प्राधिकरणबाट विदा भएर कुलमान घरै बसून र प्राधिकरणमा बेथिति जन्मेर मुलुक अन्धकारमा डुबोस् भन्ने चाहना कसैले राखेको पनि होला । त्यस्तो दुस्वप्न पूरा हुनु हुँदैन । त्यस्तो दुस्वप्न पूरा हुनपनि सक्दैन । कुलमानजस्ता जनमनमा बसेका विज्ञ ब्यक्तिहरु देशको उज्यालो जोगाउने र जगाउने ठाउँमा हुनुपर्छ । आशाको किरणलाई बन्द कोठामा थुनेर अध्यारोको सहारा लिएर देश ‘चलाउने’ रहर गर्न पाईन्न । त्यसको अर्थ उनी उही पदमा दोहोरिनुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरुलाई अझ गहन जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्योभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर सरकार त्यसो गर्न तयार छैन ।
भदौ मसान्तको विहानै भूकम्पको कडा झड्काले मन हल्लाएपनि कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा एउटा आशालाग्दो समाचार पढ्न पाईएको थियो । ‘गौतमको बाटो अझैं खुलेन’ शीर्षकको समाचारले मनमा आशाको तरंग दिएपनि त्यसको भोलीपल्ट उनको सिफारिश, नियुक्ती र सपथका कार्यक्रम फटाफट सकिए । गौतम २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भए । उनी यो पराजय स्वीकार्न पटक्कै तयार भएनन् । पराजित भएलगत्तै राजीनामा गराउने पात्र देशैभर खोजिरहे । डोल्पादेखि काठमाडौंसम्म त्यस्ता पात्र खोजे । निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू उठ्ने र प्रतिनिधिसभामा जाने रहर गरिरहे । उनको यो रहरले मूर्तरुप लिएन । अन्तमा उनी मनोनित कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए । उनको रहरलाई पार्टीभित्रको संघर्षले मलजल ग¥यो । प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको, पार्टीको उपाधक्ष्य पदमा रहेको ब्यक्तिलाई राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त विषय विज्ञको रुपमा लैजाने रहर गर्नु जनमतको अपमान हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा यतिबेला सबैभन्दा उपर्युक्त पात्र त कुलमान घिसिङ थिए । उनी हुँदा त्यो सभाको गरिमा बढ्थ्यो । उनको विज्ञता राष्ट्रलाई काम लाग्थ्यो । सरकारले यतातिर सोच्दै सोचेन । सरकार जनमनको भाषा पढ्न चाहन्न भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि गरिरहेको छ ।
सरकार पद्दति र संस्थालाई ध्वस्त बनाउन असाध्यै सिपालु छ । प्रधानमन्त्री आफैंलाई सबै विषयको विज्ञ भन्ठान्छन् । विज्ञान र विज्ञताको बारम्बार अपमान गर्छन् । आफ्नो कार्यकालमा आफूबाहेक अरुले नाम कमाउनु हुन्न, जनताले अरुलाई मन पराउनु हुन्न भन्ठान्छन् । कसैले राम्रो काम गरिरहँदास्वतस्फूर्त भएको चर्चालाई प्रचार गरायो भनेर आरोप लगाउछन् । आफ्नो यो शैली जति आलोचित हुँदापनि सच्चिन तयार हुन्नन् । विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमानलाई नरुचाएका ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभामा किन लैजान्थे ?
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित तथा सत्तारुढ दलको उपाधक्ष्यलाई राष्ट्रिय जीवनको ख्यातिप्राप्त ब्यक्ति तथा विज्ञहरुका लागी छुट्याईएको कोटामा राष्टिय सभामा नियुक्ती दिने अवस्था आउला कि भनेर राष्ट्रपतिलाई पनि अप्ठेरो लाग्नुपर्ने थियो । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राखेको भनेर आलोचित राष्ट्रपतिले पनि यस्तो विषयमा आफ्ना सल्लाहकारमार्फत अलिकति चासो राखेर आफ्नो छवि सुधार्न रहर गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरु पनि यस्तो कुरामा अलिकति सचेत हुनुपर्ने हो । तर त्यसो गरेको पाईएन । संविधानमा उक्त नियुक्ति पाउने ब्यक्तिको योग्यताका बारेमा केही नलेखिएकोले कानूनी हिसाबले उचितै होला । तर नैतिक दृष्टिकोणबाट यो काम उचित होइन । पद दिने र लिने सबैले बुझेकै छन् । ‘हारेको मान्छे विज्ञको भाग खोसेर गयो’ भन्ने आलोचना सुन्नुभन्दा कुलमान घिसिङजस्ता ब्यक्तिलाई सिफारिश गर्न सकेको भए वामदेवले ईज्जत पाउने थिए । बारम्बार पद कमाउन रहर गर्नेले कहिलेकाही त ईज्जत कमाउनपनि रहर हुने हो । तर, त्यस्तो रहर गरेको पाईएन ।
कुलमान घिसिङलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सकेको भए त्यसको फाईदा सरकारलाई नै हुन्थ्यो । विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दा राज्यले उनको विज्ञताको फाईदा उठाउन पाउथ्यो । विजुली नेपालको असाध्यै ठूलो सम्पत्ती हो । सेतो सुन हो । विजुली विज्ञ राष्ट्रिय सभामा हुनु त्यो सभाका लागी गर्वको कुरा हुन्थ्यो । आम नजरमा गलत ठहरिएका पात्र सिंगारिरहेको सरकारले आफ्नो धूमिल छवि अलिकति भएपनि सुधार्न पाउथ्यो । यो भूलसुधारको एउटा राम्रो मौका थियो । सरकारले त्यो रहर गरेन । राष्ट्रिय सभालाई विद्धतसभा बनाउन रहर नगर्नु जनमन र जनमत दुबैको अपमान हो ।
(२०७७ साल असोज १ गते बिहिबार)